Mihenjana ny fifandraisan’ny Haindò sy ny Miozolomana taorian’ny fandrobana ny tempoly Haindò tao an-tanàndehibe Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Manana ny lalàna henjana indrindra hanenjehana ny fitenenan-dratsy i Pakistan
Voadika ny 21 Febroary 2021 4:54 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Septambra 2019)
Manana ny iray amin'ireo lalàna henjana indrindra manenjika ny fitenenan-dratsy manerantany izay matetika tafahoatra i Pakistan. Sary tao amin'ny Wikipedia. CC BY-SA 4.0
Tamin'ny 15 Septambra 2019, nipoaka ny fihetsiketsehana tao an-tanàndehiben'i Ghotki, any atsimo atsinanan'i Pakistan. Namaly ny tranga voalaza fa fanevatevana ny Mpaminany Muhammad nataon'ny mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina Haindò ireo mpanao fihetsiketsehana. Nandroba ny tempoly Haindò ireo mpanao fihetsiketsehana ary nanimba ny Sekolim-panjakana Sindh izay niheverana fa nisian'ny fanevatevana. Nijanona tany an-trano ny vondrom-piarahamonina Haindò noho ny tahotra satria nisy horonantsary marobe niseho tamin'ny tambajotra sosialy nampiseho an'ireo mpanao fihetsiketsehana nilanja kibay sady nihiaka teny filamatra.
Ho valin'ny fihetsika feno hery setra nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana dia niloa-bava nanoloana ny fanimban-javatra ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Miozolomana sy Haindò niaraka tamin'ny mpisera aterineto sasany nanamarika fa tohanan'ny lalànan'ny fitenenan-dratsy ny mpivavaka mahery fihetsika.
Ilay lazaina fa fihetsika fanevatevana
Voampanga ho nanao fanamarihana tamin'ny teny fanevatevana ny mpianany Muhammad Ihtisham i Notan Lal, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Haindò sady tompon'ny Sekolim-panjakana Sindh. Nametraka ny fitoriana voalohany (FIR) araka ny andininy faha-295 (c) amin'ny fehezan-dalàna famaizana Pakistaney izay miresaka momba ny “fanamarihana manala baraka ny Mpaminany Masina” ny rain'i Ihtisam, Abdul Aziz Rajput.
Araka ny tatitra dia niaiky ilay mpianatra Ihtisham fa nanitatra ilay fiampangana fanalam-baraka satria tezitra tamin'ny tale Notan Lal izy noho ny fibedesany azy. Nangataka famelan-keloka tany amin'i Notan Lan i Ihtisam.
Hoy ilay bilaogera Bilal Farooqi:
Voalaza fa voampanga ho nanao fitenenan-dratsy tamin'ireo mahery fihetsika, izay nanimba ny sekoliny ilay tale Haindò any Ghotki, Sindh. Tandindomin-doza ny vondrom-piarahamonina Haindò ao amin'ilay faritra. Tsy maintsy omena fiarovana avy hatrany izy ireo! Lahatsary sy tatitra avy amin'i Shankar Meghwar
Rehefa nanomboka niparitaka tao amin'ny tambajotra sosialy ny horonantsary nampiseho ilay fanimbana dia nisy ny fifandonana noho ny fahasimban'ny tempoly, tao ny olona nanameloka ny zava-nitranga ary nitaky ny fisamboran'ny polisy avy hatrany ireo olon-dratsy.
Nanoratra i Hamza Ali Abbasi:
#Ghotki Amin'ny maha Miozolomana sady Pakistaney ahy, menatra aho androany ary miala tsiny amin'ny vondrom-piarahamonina Haindò Pakistaney. Tsy maintsy mitady famelan-keloka amin'i Allah isika rehetra noho izao habibiana izao. Tonga ny fotoana hanaovana ezaka ideolojika voarindra hanoherana ity fomba fisainana ity izay miteraka tranga toy izany.
Voalaza fa voampanga ho nanevateva tany Ghotki ilay mpampianatra Haindò.
Fantatray ny fomba fiampangan'ny olona ny tsy Miozolomana ho maniratsira. Andraikitry ny fanjakana ny miaro ny olom-pireneny ary mandray andraikitra amin'ireo izay manararaotra mampiasa ny lalànan'ny fanevatevana
Nandrava ny sekoly ny andian'olona ary avy eo nanimba ny Tempoly Haindò noho ny fiampangana fanevatevana tany Ghotki.
Tokony hosamborin'ny governemanta ireo nandrava ny Tempoly sy ny sekoly, tsy misy olona manan-jo hamotika toeram-pivavahana hafa. Ary tokony mamoaka lalàna hampiatoana ny fanararaotana ny lalànan'ny fanalam-baraka ny fanjakana. 2/2
Ho fanampin'izany, nanome toky ny vahoaka ny Inspektora Jeneralin'ny Polisy ao amin'ny faritra Sukkur:
Eny, miezaka mamehy ny toe-draharaha amin'ny fomba milamina, voakajy, tsy mitanila ary amin'ny fomba matihanina izahay. Tokony hanohana feno ny ezaka mafy ataonay ny sehatry ny fiarahamonina tony fihetsika sy nandia fianarana mba hanaovana ny fahamarinana sy hitandroana ny fandriampahalemana ao Ghotki, azafady
Nanavao hatrany ny vaovaon'ny toe-draharaha tao amin'ny tambajotra sosialy ny inspektera jeneraly:
Eo am-pelatanan'ny polisy ankehitriny ilay tompon'antoka voarohirohy tamin'ny raharaha saropady tany Ghotki. Miverina tamin'ny laoniny tao anatin'ny 12 ora ny toe-draharaha tany Ghotki.
Efa natao ny fanadihadiana ara-drariny taorian'ny fanamafisana ny zava-misy sy ny fahazoana antoka ny marina. Nisy ny tranga nanenjehana ireo jiolahim-boto ary nosamborina ireo olon-dratsy.
Araka ny fanavaozam-baovao farany, naharay fitoriana miisa telo anenjehana mpanakorontana ny polisy noho ny fanimbana, ny fandrahonana ary fanakanan-dalana.
Nisy ny tombatombana fa mpanaradia ny mpitondra fivavahana eo an-toerana antsoina hoe Pir Abdul Haq alias Mian Mithu, izay voampanga ho nandray anjara tamin'ny fanovana an-keriny ny finoan'ny vehivavy Haindò tao Sindh ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Na izany aza, araka ny filazan'ny polisy, tsy tao an-tanàna i Mian Mithu tamin'io andro io ary anisan'ny komitin'ny fandriampahalemana nihaona tamin'ny vondrom-piarahamonina Haindò tamin'io andro io ny zanany lahy, kanefa, mbola nisy ihany ny tenirohy nalaza tao amin'ny tambajotra sosialy hisamborana an'i Mian Mithu:
Nisioka ilay mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Pakistaney Kapil Dev hoe:
Zavatra iray ihany no takiana: #SamboryMianMithoo
Mila atoro ve izy ? Notereny hiova an-keriny ny zanakay vavy, nampiasainy tamin'ny fanararaotana ny fivavahana ary nandrisika herisetra tamin'ny #Haindò izy. Mitondra endrika ratsy ho an'i #Pakistan ny biby goavambe toy izany.
Andao haverina ny sioka hanamafisana ny feontsika sy hisamborana azy.
Nanameloka ny tranga ny Komisiona Miaro ny zon'olombelona ao Pakistan ary nangataka ny tompon'andraikitra hiditra an-tsehatra avy hatrany hampihatra ny lalàna sy ny filaminana ao an-toerana.
Mila mandray andraikitra haingana ny tompon'andraikitra hampitsaharana ny herisetra sy hiantohana ny fiarovana ny talen'ny sekoly. Mampivarahontsana ny horonantsary niparitaka vao haingana: tsy mifaditrovana ny herisetra nataon'ny andian'olona tamin'ny mpikambana iray avy amin'ny mpivavaka vitsy an'isa.
Nanampy tamin'ny fiarovana ny voampanga, Notan Lal i Ramesh Kumar Vankwani, Pakistaney mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena Tehreek-i-Insaf (PTI), izay mitarika ny Filankevitra Haindò ao Pakistan. Nafindra tany amin'ny toerana tsy fantatra i Lal mba hiarovana azy lavitra ny vahoaka ary hatolotra ny polisy raha ilaina izany.
Hafatra lehibe momba ny tranga tao Ghotki
Na teo aza ny savorovoro tao an-toerana, olona marobe avy any Ghotki no tonga nanohana ny vondrom-piarahamonina Haindò. Tsy niari-tory tao amin'ny tempoly nandritra ny alina fotsiny ihany mba hanohana azy ireo ny loholona Miozolomana sasany, fa nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana am-pilaminana ihany koa, nanampy ny polisy hitandro ny filaminana, ary nandefa hafatra ho an'ny mpanaradia azy ireo hanaja ny fahamasinan'ny toeram-pivavahana.
Omaly, nitsidika ny tempolin'i Sacho Satram Das izahay ary nihaona tamin'ny vondrom-piarahamonina Haindò, nihaona tamin'ny mpitondra fivavahana sy manam-pahaizana Miozolomana tao an-toerana ihany koa izahay. Manome toky izahay fa hisy ny fanadihadiana marina aorian'ny fanamafisana ny zava-misy. Handresy ny rariny. Ankehitriny niverina tamin'ny laoniny ny toe-draharaha aty #Ghotki.
Taorian'ny famonoana ny governoran'ny Punjab Salman Taseer tamin'ny taona 2011 noho ny fahitany ny lalàna momba ny fanevatevana tao amin'ny firenena dia nitombo ny adihevitra momba ny lalànan'ny fanevatevana tao Pakistan. Nandova ny lalànan'ny fitenenan-dratsy izay nampiharin'ny mpanjanaka Britanika i Pakistan ary nanamafy izany tamin'ny alàlan'ny fampidirana ireo singa avy amin'ny lalàna Miozolomana Sharia nandritra ny taompolo 1980 ka nahatonga izany ho iray amin'ireo lalàna henjana indrindra iadiana amin'ny fanevatevana. Tao anatin'ny telopolo taona lasa, olona an'arivony maro no voasambotra ary olona am-polony no voalaza fa novonoina taorian'ny fiampangana fitenenan-dratsy.
Talohan'izay, tsy niresaka momba izany intsony ny olona noho ny tahotra valifaty fa ny firesahana ampahibemaso ny fomba nampijalian'ny mahery fihetsika ara-pinoana sy ny lalànan'ny fitenenan-dratsy an'i Aasia Bibi, Mashal Khan, Junaid Hafeez, Shama Shehzad ary ny hafa no nisy.